BeautifulSoup si loo soo saaro mawduuca bogga shan daqiiqo - Khabiirka cidhiidhiga ah
. Waxay abuurtaa geedo geedo ah bogagga shabakadda waxayna diyaar u yihiin Python 2 iyo Python 3. Haddii aad leedahay website aan si sax ah loo xoqin, waxaad isticmaali kartaa qaababka BeautifulSoup kala duwan. Macluumaadka la soo bixiyay ayaa noqon doona mid dhameystiran, la akhrisan karo, oo la heli karo oo badan oo ku jira gaaban iyo gaaban ereyada dheeraadka ah.
Sida BeautifulSoup, lxml waxaa lagu dhejin karaa html. Qalab adag oo habboon - converted concrete grain silo. Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee luqaddaan barnaamijka waa in ay bixiso spam ilaalin iyo natiijooyin ka fiican waqtiga xogta dhabta ah. Labada Lxml iyo BeautifulSoup waa sahlan-inay bartaan waxayna bixiyaan saddex hawlood oo waaweyn: qaabeynta, kala-beddelidda iyo is-beddelka geed. Tababarkan, waxaan ku baraynaa sida loo isticmaalo BeautifulSoup si ay u qabato qoraalka boggaga internetka ee kala duwan.
Talaabada koowaad waa in lagu rakibo BeautifulSoup 4 adoo isticmaalaya dhuunta. Qoraalkani wuxuu ka shaqeeyaa labada Python 2 iyo 3. BeautifulSoup waxaa lagu baari karaa Python 2 code; iyo marka aan u isticmaalno Python 3, waxay si toos ah u cusbooneysiisaa nuqulkii ugu dambeeyay, laakiin koodhka lama cusbooneysiiyo ilaa aan ku rakibno baakadka Python buuxa.
Waxaad ku rakibi kartaa dhajiye ku habboon, sida html5lib, lxml, iyo html. dhejiye. Haddii aad rakibtay dhuumo, waxaad u baahan doontaa inaad ka soo qaadato bs4. Haddii aad soo dejiso ilaha, waxaad u baahan doontaa inaad soo dejiso maktabad Python. Fadlan xasuusnoow in khilaafka lxml uu ka yimaado laba nooc oo kala duwan: Dareeraha XML iyo sahaliyaha HTML. Parser-ka HTML si fiican uma shaqeyneyno qaybaha hore ee Python; sidaas, waxaad ku rakibi kartaa xuddeyaha XML haddii khilaafka HTML joojiyo jawaabta ama aan si habboon u rakibin. Dhexdhexaadiyaha lxml ayaa si isdaba-joog ah oo lagu kalsoonaan karo wuxuuna siinayaa natiijooyin sax ah.
Adeegso BeautifulSoup si aad u hesho faallooyin
BeautifulSoup, waxaad ka heli kartaa faallooyinka bogga internetka ee la doonayo. Faallooyinka waxaa badanaa lagu kaydiyaa qaybta "Object Object Comment" waxaana loo isticmaalaa in ay si sax ah u muujiso bogga internetka.
Cinwaanada, Xiriirrada, iyo cinwaanada
Waxaad si sahal ah uga saari kartaa boggaga, xiriirka, iyo cinwaanada BeautifulSoup. Waxaad u baahan tahay inaad hesho bog-bogga oo leh lambar gooni ah. Marka calaamadeynta la helo, waxaad xogta xoqin kartaa laga soo qaaday cinwaanada iyo cinwaanada hoose.
U diyaari DOM
Waxaan ku socon karnaa geedaha DOM adoo isticmaalaya BeautifulSoup. Tags chaining wuxuu nagu caawin doonaa inaan soo saarno xogta ujeedooyinka SEO.
Marka tallaabooyinka kor lagu sharraxay ay dhammaystirmaan, waxaad awoodi doontaa inaad si habboon u faafiso qoraalka websaydhka. Nidaamka oo dhan ma qaadan doono wax ka badan shan daqiiqo wuxuuna ku ballanqaadayaa natiijooyinka tayada. Haddii aad raadineyso inaad ka soo qaadato xogta dukumeentiyada HTML ama faylasha PDF, ka dibna BeautifulSoup ama Python kuma caawin doonto. Xaaladahan oo kale, waa inaad isku daydaa jajabta HTML iyo sahaminta dukumiintiyadaada si fudud. Waa inaad ka faa'iideysataa qaabka quruxda quruxda leh ee quruxda leh si loo xoqo macluumaadka ujeedooyinka SEO. Xitaa haddii aan doorbidno xayeysiinta HTML-ga, waxaan wali ka faa'iideysan karnaa nidaamka taageerada BeautifulSoup oo natiijooyinka tayada ku heli kara arrimo ah daqiiqado.